Hagaaji qaladka isticmaalaha iyo lambarka sirta ah ee ku jira iCloud | Wararka IPhone
Alejandro Cabrera | | iCloud, Casharrada iyo buugaagta
Tani waa cayayaan duug ah, laakiin waa mid aan sii daawaneyno, xitaa ka dib markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyo macruufka 9. Mararka qaarkood iPhone wuxuu galaa wareegga meesha uu had iyo jeer ku weydiisto xogtaada Helitaanka iCloud, isticmaale iyo erey sir ah Xitaa markaad gasho Aqoonsigaaga Apple iyo lambarkaaga sirta ah, khaladku wuxuu keenaa magaca iyo lambarka sirta ah in mar labaad iyo mar kale la weydiiyo (iyo mar kale, iyo mar kale), wax aad looga xumaado, sax?
Haysashada iPhone ku xayiran wareegga gelitaanka iCloud wuxuu noqon karaa mid aad u jahwareersan. Nasiib wanaagse, caawimaaddii ayaa soo dhow. Qodobkaan waxaan haynaa shan xal oo kala duwan oo loogu talagalay wareejinta gelitaanka iCloud.
1 Isuji si aad u damisid
2 Kala goynta
3 Hubi in iCloud ay shaqeyneyso
4 Dib u celi lambarkaaga sirta ah
5 Kaabta iyo soo celinta iPhone
Isuji si aad u damisid
Khaladka galaya aqoonsiga iCloud waxaa sababi kara a cilad ku xirnaanta Wi-Fi , iyo sida ugu fudud ee lagu saxi karo waa dami iPhone ka dib daqiiqad ka dib mar kale daar. Tani waxay qaadataa oo keliya dhowr daqiiqo, haddii dhibaatadana la xalliyo, waxay kuu badbaadin doontaa tan xalal kale oo ah dhibaatada aad isku dayi karto. Raac talaabooyinkan si aad u damiso iPhone-kaaga oo aad dib ugu soo celiso:
Qabo badhanka quful / toosid (dusha sare ee iPhone-ka, ama dhinaca midig haddii ay tahay moodel casri ah) illaa shan ilbidhiqsi illaa ay ka muuqato ikhtiyaarka demintu.
Ku dhaji astaanta Awoodda korantada dhanka midig.
Sug ilaa 30 ilbiriqsi illaa shaashaddu ay gebi ahaanba madoobaato.
Riix badhanka Qufulka / Wake si aad telefoonka dib ugu daarto.
Marka ay mar horeba daaran tahay, waxay qaadan doontaa in yar ka hor inta aanu iCloud bilaabmin. Aqoonsigaaga Apple iyo lambarkaaga sirta ah waa la codsan karaa, mar alla markii ay galaan waa inaadan mar labaad iyaga codsan.
Haddii dib u dejinta iPhone-kaagu uusan hagaajin dhibaatada, iskuday ka bax iCloud ka dibna markale soo gal. Raac talaabooyinkan:
Tag Dejinta> iCloud.
Hoos u rog oo taabo Ka bax.
Riix Ka saar iPhone.
Hada taabo Soo gal.
Gali Aqoonsigaaga Apple iyo lambarkaaga sirta ah.
Dib-u-dejintaan iCloud ayaa hagaajin karta dhibaatada su'aasha ah.
Hubi in iCloud ay shaqeyneyso
Kahor intaadan sii wadin, waxaan kuu soo jeedinaynaa inaad taas iska hubiso iCloud si sax ah ayuu u shaqeeyaa.
Waa inaad tagtaa https://www.apple.com/support/systemstatus/ on your Mac ama iPhone iyo hubi in oo dhan adeegyadu waa cagaar. Haddii ay dhibaato ka timaaddo iCloud-ka adeegga Apple, markaa waxaa ugu wanaagsan in la sugo Apple si ay u hagaajiso dhowr saacadood gudahood.
Dib u celi lambarkaaga sirta ah
Haddii midkoodna uusan ku guuleysan talaabooyinka kor ku xusan, oo Xaaladda Nidaamka Apple horay loo xaqiijiyay inay si sax ah u shaqeyneyso, markaa tallaabada xigta waa beddel lambarkaaga sirta ah ee Apple ID. Waa dhib, laakiin dhibaatada badanaa waa la xalliyaa. Beddelka ereyga sirta ah ayaa fudud in laga maareeyo Mac-gaaga (ama Windows PC).
Fur furaha shabakadda Safari oo tag https://appleid.apple.com
Guji Beddel erayga.
Gali Aqoonsigaaga Apple oo guji Next.
Xullo email xaqiijin ama ka jawaab su'aalaha amniga oo guji Next.
Guji Sameey sirta.
Gali a password cusub gudaha erayga sirta ah ka dibna xaqiiji lambarka sirta ah.
Hadda ku qor lambarka sirta ah ee cusub ee iPhone-kaaga markii la weydiiyay. Waa in ay aqbasho iPhone-ka oo ay hagaajiso dhibaatada.
Kaabta iyo soo celinta iPhone
Haddii ay iPhone sii wadato weydiinta lambarka sirta ah ee 'iCloud password', waxaad horayba isugu dayday inaad dansato iPhone-ka oo aad shidato, adigoo beddelaya lambarkaaga sirta ah ee iCloud iyo xulashooyinka kale ee aan kor ku soo sheegnay, ka dib tallaabada ugu dambeysa ayaa ah gurmad iyo soo celinta aad iPhone.
Waxaad u baahan doontaa inaad sameyso a gurmad aad iPhone in computer ah sababtoo ah ma awoodi doonto inay dib u dhigto illaa iCloud.
Isku aad iPhone in Mac adoo adeegsanaya fiilada USB-ga.
Guji Qalabka oo dooro iPhone-kaaga.
Xullo samee kaydinta kombiyuutarka.
Guji dib u taageer hadda
Sug hawsha kaydinta si aad u dhammayso (waxaad arki doontaa baarka horumarka buluugga ah ee dusha sare ee iTunes).
Markay dhammaato waxaad bilaabi kartaa hawsha dib u soo celinta iPhone-kaaga:
Hayso in aad iPhone ku xiran Mac ah.
Guji Dejinta> iPhone> iCloud.
Guji Raadi iPhone-kayga.
Dami Raadi iPhone-kaygae.
Ku qor lambarkaaga sirta ah ee Apple ID oo guji Deactivate.
Ku laabo iTunes-kaaga Mac-ga, guji Soo celi iPhone.
Raac nidaamka dib u soo celinta oo isticmaal kaabta aad hadda abuurtay ka hor hawsha dib u soo celinta. Tag ka soo dejiso nooca ugu dambeeyay ee macruufka Apple, oo soo celi iPhone-kaaga adoo isticmaalaya keydka.
Mid ka mid ah talaabooyinkan waa inaad ku xallin lahayd dhibaatada in aqoonsigaaga Apple iyo lambarkaaga sirta ah si joogto ah looga codsado qalabkaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » iCloud » Sidee loo hagaajiyaa iPhone-ka oo sii wadaya weydiinta magacaaga iyo lambarkaaga sirta ah ee 'iCloud'
Haye, tan uun bay igu dhacdaa: O, waxaan beddelay lambarka sirta oo dib ayaan u cusboonaysiiyay qalabkeyga oo dhan, laakiin waxay sii socotaa inay ka muuqato iPhone 6, iPad Air iyo Macbook pro. Wali ma hagaajin
Jawaab David C ++
Mahadsanid David, Ma sameysay 5ta xal ee suurtogalka ah?.
Jawaab Alejandro Cabrera
WAA AY IIGU DHACAYAAN IMANKA QARANKA SHANAAD, AYAAN ISKU DAYAY INAAN TILAABO XIRITAANKA KALSANKA DHAQANKA AH SI AAN U EEGO HADII DHIBAATADA AYAN JOOJIN.
Ami waxay igu dhacdaa AppStore ma soo dejisan karo ama cusbooneysiin karo wax aanan garanayn waxa la sameeyo ma doonayo inaan lumiyo xadhiga
Ku jawaab Elmer
Waad salaaman tahay, waxaan sameeyay dhamaan talaabooyinka hadana wali waxaan heystaa dhibaato isku mid ah, waxaan heystaa qalab kale oo isla isla xisaabtanka ah isla markaana si fiican ayuu u shaqeeyaa, waxaan ka soo galayaa pc-ga waxayna ii ogolaaneysaa inaan galo xisaabta icloud oo aanan ka fikiri karin wax kale, qof ayaa garanaya xalka
Qaababka midkoodna iima shaqeyn. Waa mobiil cusub oo ii oggolaan maayo inaan sameeyo keyd maxaa yeelay ma habbeysna (markii aan hore u soo ceshaday iPhone-kayga hore kan). Waxay i siisaa farriinta soo dhaweynta, waan furaa waxayna si toos ah ugu socotaa shaashadda Aqoonsiga Apple, halkaasoo ay i siiso dhibaatada.
Hadda waxaan gebi ahaanba ka qoomameynayaa maalintii aan haystay iphone-kii iigu horreeyay
In kasta oo aanu ku xirnayn shabakadda, haddana waxay si joogto ah ii weydiisaa inaan ku xirmo iCloud. Xitaa ma aqrin karo bog aamusnaan ah.